ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ်တိုင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘဝရည်မှန်းချက်တွေအတွက် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားနေချိန် မှာကိုယ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေကို ထိခိုက်လျော့နည်းသွားစေမယ့် အချက်တွေကို သတိမပြုမိဘဲဖြစ်သွားလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံတစ်ဦးတဲ့ Amy Morin ရဲ့ “ 13 Things Mentally Strong People Don’t Do” ဆိုတဲ့စာအုပ်မှ စာရေးသူရဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအရ လူတိုင်းအတွက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဟာ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုရှိဖို့ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေ၊ စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့အပြုအမူတွေကို ထိန်းသိမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ မှန်ကန်တဲ့လမ်းညွန်မှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာသူတွေမှာရှိတဲ့ အချက် (၁၃) ချက်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။
How to Write an Email in English for Business
As today is IT age, email is more used than letter because it createsafast, reliable form of communication that is free and easily accessible. They allow people to foster long-lasting, long-distance communication. But, letter style is also still used in the present. Therefore, this lecture is aimed to improve communications via email for all businesses.
The reason why business writing skills are so important is that the global workplace forces us to improve our communication skills including emails, letters, reports, business documents, etc. In this lecture, we will discuss dos and don’ts in preparing an email in business communication.
How to WriteaCV in English for Business
Curriculum Vitae(CV) isadocument used byaperson to present their backgrounds and skills as well as the most important tool when applying forajob. If the CV is poorly presented or badly written, an applicant is going to have trouble getting the job he wants although he has good qualifications and experiences. This lecture is aimed to help job applicants to get the first impression ofapotential employer throughaperfect CV in English.
This lecture emphasizes on the useful ways, key descriptions, dos and don’ts in preparation ofaresume in English.
A job interview is both an opportunity for the organization and for the candidate. It determines whetheracandidate’s motivations, characteristics and personality are appropriate for the required vacancy. Therefore, this lecture is aimed for the applicants to understand how to answer the job interview questions systematically.
This lecture discusses the main factors to be careful about answering the job interview questions and how to answer it effectively.
ဒီနေ့ခေတ်အချိန်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို စီမံခန့်ခွဲနေကြတဲ့ CEO တွေ အများစုဟာ မဟာဗျူဟာ အသစ်တွေဖော်ဆောင်ခြင်း၊ ဈေးကွက်သစ်တွေ ရှာဖွေခြင်းတွေမှာ ကျွမ်းကျင်ကြပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ အားနည်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီ video လေးကတော့ ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်ပိုင်းမှာ နာမည်ကျော်ကြားသူ Patrick Lencioni ရဲ့ “The5Temptations ofaCEO” ဆိုတဲ့စာအုပ်မှ CEO တွေရဲ့ မှန်ကန်ကောင်းမွန်တဲ့ အမူအကျင့် ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို အားနည်းသွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကို သတိပြုမိစေဖို့ ရည်ရွယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
CEO တိုင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံးက ကိုယ့်ရဲ့အဓိက ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေဟာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ CEO တွေ သတိပြုရှောင်ကျဉ်ရမယ့် "ဆွဲဆောင်မှု (၅) ခု" ကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
The success of an organization mainly depends on its employees. HR of the organization have to manage the employees to work with full commitment. Therefore, this lecture shows how to start upaHR department in an organization.
This lecture is composed of three parts of Human Resource Management activities that are central points for managing employees of an organization
တစ်ချို့လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအတွက် ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေပဲတွေ့တွေ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကို အရှိန်မလျှော့ဘဲနဲ့ အမြဲကြိုးစားနေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီ video လေးကတော့ စိတ်ပညာပါမောက္ခတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Dr. Angela Lee Duckworth ရဲ့ Grit ဆိုတဲ့စာအုပ်မှ ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုရှိခြင်းတို့ဟာ ပညာရေး၊ စီးပွားရေးနဲ့ အခြားဘယ်လိုနယ်ပယ်တွေမှာမဆို အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက် အဓိကအချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ ဘဝမှာရည်မှန်းချက်တွေ ပြည့်ဝစေဖို့၊ အောင်မြင်မှုတွေရရှိစေဖို့နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိစေဖို့ အတွက် အရေးအကြီးဆုံး စရိုက်လက္ခဏာတစ်ခုက အလျှော့မပေးစတမ်း ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရှိမှုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်
Blink ဆိုတာရဲ့တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်က “မျက်စိတစ်မှိတ် လျှပ်တစ်ပြတ်အချိန်ကလေး” ကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူသားတွေရဲ့ လက်တွေ့ဘဝမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကို မြန်မြန်ချဖို့ခက်ခဲတာမို့ ကြန့်ကြာနေတတ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာလေးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စာရေးသူ Malcolm Gladwell ရဲ့ “Blink” ဆိုတဲ့စာအုပ်မှ ကြုံတွေ့ လာတဲ့ကိစ္စရပ်တွေမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေအရ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အချိန်တိုအတွင်းမှာ ဘယ်လိုလျင်မြန်စွာနဲ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်ရမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သိရှိစေရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ လူတွေဟာ အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကို ဖြေရှင်းရာမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တာထက် ဖြစ်ပေါ် လာတဲ့အခြေအနေအရ အချိန်တိုအတွင်းမှာ လျှင်မြန်စွာသုံးသပ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းက ပိုပြီးလက်တွေ့ကျတယ်ဆို တာကို ဖော်ပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
In business, negotiation is important in both informal day-to-day interactions and formal transactions such as negotiating conditions of sale, lease, service delivery, and other legal contracts. Good negotiations contribute significantly to business success. In this lesson, we will discuss the advantages of having good negotiation skills and how to improve them progressively.
We need negotiation skills everywhere like in communicating with our supervisors, co- workers, families and all the partners who are going forward with us. In this lesson, we discuss in details the importance of negotiation skills in different sectors.
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ကြံ့ခိုင်ရေးအားကစားနည်းပြတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Ben Bergeron ဟာ ကမ္ဘာပေါ်က အသန်မာဆုံး အားကစားသမားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ video လေးမှာတော့ စာရေးသူ Ben Bergeron ရဲ့ “Chasing Excellent” ဆိုတဲ့စာအုပ်မှ ကမ္ဘာ့အသန်မာဆုံးအားကစားသမားတွေကို လေ့ကျင့်ပေးရင်းနဲ့ သိရှိခဲ့ရတဲ့ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကို သိရှိစေရန် ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကမ္ဘာကျော်အားကစားသမားတွေအနေနဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ကိုရောက်ရှိနေတာဟာ သူတို့ရဲ့ပါရမီကြောင့်အဓိက မဟုတ်ဘဲ စိတ်အားထက်သန်မှု၊ အာရုံစူးစိုက်မှု၊ ကြံ့ကြံံ့ခံနိုင်စွမ်းရှိမှု၊ မလျှော့တမ်းစွဲမြဲစွာ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတို့ကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ အားကစားသမားတွေသာမကဘဲ နယ်ပယ်အသီးသီးမှ ဘယ်သူမဆို လက်တွေ့အသုံးချသင့်တဲ့အချက်တွေကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။
"Trust" ဆိုတဲ့ ယုံကြည်မှုက လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အကြား၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမှာ ဘယ်လိုပတ်သက်ဆက်စပ်မှုတွေကိုမဆို သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ လူတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ဟောပြောပို့ချသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Stephen M.R Covey ရဲ့ “Speed of Trust” ဆိုတဲ့ စာအုပ်မှာ ယုံကြည်မှုကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ လိုအပ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ ယုံကြည်မှုကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာတွေကို ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
အဖွဲ့အစည်းတိုင်း လုပ်ငန်းခွင်တိုင်းမှာ ဦးဆောင်ခန့်ခွဲနေရသူတွေအတွက် အခြားသူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာအခြေခံအကျဆုံးအရာဟာ "ယုံကြည်မှု" ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ video လေးမှာတော့ ယုံကြည်မှုရရှိအောင် တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းဟာ ဘယ်လိုအရေးပါသလဲ၊ ဒါကိုရရှိဖို့ ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာတွေကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။